Gịnị Mere Ndị Mmadụ Ji Amụ Asụsụ Ọzọ? | Ndị Na-eto Eto Na-ajụ, Sị
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Amharic Arabic Arabic (Lebanon) Armenian Azerbaijani Brazilian Sign Language Bulgarian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitumbuka Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Faroese Fijian Finnish French Georgian German Greek Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hindi Hindi (Roman) Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Kyangonde Lingala Lithuanian Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maltese Mongolian Myanmar Norwegian Nzema Oromo Ossetian Pangasinan Papiamento (Curaçao) Polish Portuguese Portuguese (European) Romanian Russian Sepedi Serbian Serbian (Roman) Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Tagalog Tatar Telugu Thai Tigrinya Tiv Turkish Ukrainian Uzbek Uzbek (Roman) Vietnamese Yoruba
Ọ naghị adị mfe ịmụ asụsụ ọzọ. Ịgba mbọ na-amụ ya ga-egosi ma ị̀ na-adị uchu na-adịkwa umeala n’obi. Ma ọ̀ bara uru ịmụ asụsụ ọzọ? Ọtụtụ ndị na-eto eto kwetara na ịmụ asụsụ ọzọ bara uru. Isiokwu a ga-akọwa ihe mere ha ji amụ asụsụ ọzọ.
Gịnị mere o ji esi ike?
Ọtụtụ ndị na-amụ asụsụ ọzọ n’ihi na ụlọ akwụkwọ ha chọrọ ka nwa akwụkwọ ọ bụla mee ya. Ndị ọzọ na-amụkwa ya n’ihi na e nwere ihe ha chọrọ iji ya eme. Dị ka ihe atụ:
Otu nwa agbọghọ bi n’Ọstrelia aha ya bụ Anna chọrọ ịmụta asụsụ ndị Latvia, bụ́ asụsụ ndị obodo mama ya. Ọ sịrị: “Ndị ezinụlọ anyị na-akwado ịga Latvia, m chọrọ ka mụ na ụmụnne m nwee ike ịna-akparịta ma anyị ruo.”
Otu Onyeàmà Jehova aha ya bụ Gina, bụ́ onye Amerịka, mụtara Asụsụ Ndị Ogbi nke Amerịka, kwagazie Beliiz ka o nwee ike ijekwuru Jehova ozi. Ọ sịrị: “Naanị ndị onye ogbi ma bụ ndị na-asụ asụsụ ya. Ọ na-atọ ndị mmadụ ụtọ ma m gwa ha na ihe mere m ji mụọ asụsụ ndị ogbi bụ ka m nwee ike ịkụziri ha Baịbụl n’asụsụ ha.”
Ị̀ Maara? Baịbụl buru amụma na a ga-ekwusa ozi ọma Alaeze Chineke ná “mba niile na ebo niile na asụsụ niile.” (Mkpughe 14:6) Iji mezuo amụma a, ọtụtụ ndị na-eto eto bụ́ Ndịàmà Jehova na-amụ asụsụ ọzọ ka ha nwee ike ikwusakwu ozi ọma n’obodo ha ma ọ bụ n’obodo ọzọ.
Ọ naghị adị mfe ịmụta asụsụ ọzọ. Otu nwa agbọgho na-eto eto aha ya bụ Corrina kwuru, sị: “Eche m na ihe dị n’ịmụ asụsụ ọhụrụ bụ naanị ịmụta ihe ndị ahụ na-akpọ ihe ọ bụla, ma m chọpụtara na m kwesịkwara ịmụta omenala ha na otú ha si eche echiche. Ịmụ asụsụ ọzọ na-ewe oge.”
Mmadụ kwesịrị ịdị umeala n’obi ma ọ bụrụ na ọ chọrọ ịmụta asụsụ ọzọ. Otu nwa okorobịa mụrụ asụsụ Spanish, aha ya bụ James kwuru, sị: “Ị ga-agba mbọ mụta ịchị onwe gị ọchị n’ihi na a ga-enwe ọtụtụ okwu ị na-agaghị akpọta. Ma, o so n’ihe dị n’ịmụ asụsụ ọzọ.”
Nke bụ́ eziokwu bụ: Ọ bụrụ na ị ga-edili ihe ndị ị na-anaghị emeta na ọchị a ga-achị gị, ma ọ bụkwanụ nsogbu ndị nwere ike ịdapụta ma ị kpọjọọ okwu, ọ ga-eme ka ị mụta asụsụ ọzọ nke ọma.
Ihe ndị ga-enyere gị aka: Ike agwụla gị ma ọ bụrụ na ndị ọzọ na-amụta ya ọsọ ọsọ karịa gị. Baịbụl kwuru, sị: “Ka onye ọ bụla nwapụta ọrụ ya, mgbe ahụkwa ọ ga-enwe aṅụrị n’ọrụ ya, ọ bụghịkwa n’iji onwe ya tụnyere onye ọzọ.”​—Ndị Galeshia 6:4.
Uru dị n’ịmụ asụsụ ọzọ dị ọtụtụ. Dị ka ihe atụ, otu nwa agbọghọ aha ya bụ Olivia kwuru, sị: “Ị mụta asụsụ ọzọ, gị na ndị si ebe ahụ ị mụrụ asụsụ ha ga-abụ enyi.”
Otu nwa agbọghọ aha ya bụ Mary chọpụtara na ịmụ asụsụ ọzọ na-eme ka ọ dị ya ka è nwere ihe ọ dị mma ya. Ọ sịrị: “Ọ nabughị adị m ka è nwere ihe m dị mma ya, ma ugbu a m na-amụ asụsụ ọzọ, obi na adị m ụtọ mgbe ọ bụla m mụtara okwu ọhụrụ n’asụsụ ahụ.”
Nwa agbọghọ ahụ anyị kwuru okwu ya ná mmalite, aha ya bụ Gina, chọpụtara na iji asụsụ ndị ogbi akụziri ndị mmadụ Baịbụl na-eme ka ọ na-enwekwu obi ụtọ n’ozi ya. Ọ sịrị: “Ihe kacha eme m obi ụtọ bụ ịhụ otú obi na-adị ndị m na-amụrụ ihe ma m jiri asụsụ ha na-amụrụ ha ihe.”
Nke bụ́ eziokwu bụ: Ịmụta asụsụ ọzọ nwere ike inyere gị aka imeta ndị enyi ọhụrụ, mee ka ị mata na e nwere ihe ị dị mma ya, meekwa ka ozi gị na-atọkwu gị ụtọ. Ịmụta asụsụ ọzọ bụ otu ụzọ dị ezigbo mkpa e si ezi “ndị si ná mba niile na ebo niile na ndị niile na asụsụ niile” ozi ọma.​—Mkpughe 7:9.
“Mmadụ iche na ya agaghị amụtali asụsụ ọhụrụ ọ na-amụ dị ka taya moto dara afọ. Ma ị gbanweghị ya, o nweghị ebe i ji azụ aga. Ọ ka mma ka ị ghara ịna-eche na ị gaghị amụtali asụsụ ahụ, a sịgodi na ọ na-esiri gị ike.”​—Monica
“Ịmụ asụsụ ọzọ dị ka ịchọ akụ̀ dị n’ime ala. I nwere ike igwu ya ruo ọtụtụ awa, ma o nweghị ihe ị ga-egwupụta. Ma ka ị na-egwu ya na-aga, ị ga na-erukwu nso n’ebe akụ̀ ahụ dị. Ị nọgide na-agba mbọ ka ị mụta asụsụ ọzọ, ị ga-amụta ya.”​—Ethan.
“Uru kachanụ ịmụ asụsụ ọzọ ga-abara gị bụ na gị na ndị nwe asụsụ ahụ ga-ejizi ya na-akparịta ụka. Ọ bụ mgbe ahụ ka ị ga-ahụ na oge niile na mgbalị niile i tinyere na-amụ asụsụ ahụ efughị ọhịa.”​—Jessica
Ihe Ndị Ga-enyere Gị Aka Ịmụta Asụsụ Ọzọ
Iji nyere ọtụtụ ndị aka ịmụta eziokwu dị na Baịbụl, ọ dị mkpa ka a sụgharịa ya. Olee otú e si arụ ọrụ a? Olee ihe na-esiri ndị nsụgharị ike n’ọrụ ha?
Na-ezi Ozi Ọma n’Asụsụ Ọzọ
Olee otú i nwere ike isi zie onye na-anaghị asụ asụsụ gị ozi ọma?
Zigara Ya Onye Ọzọ Zigara Ya Onye Ọzọ Gịnị Mere Ndị Mmadụ Ji Amụ Asụsụ Ọzọ?
ijwyp isiokwu 62